Turkiga oo ka caawinaya Soomaaliya dhismaha xeryaha ciidanka. - Wargeyska Faafiye
Turkiga oo ka caawinaya Soomaaliya dhismaha xeryaha ciidanka.
Abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Jeneraal Cabdirisaaq Khaliif Cilmi ayaa sheegay in wasaaradda gaashaandhigga Turkiga ay Soomaaliya ka caawineyso dhismaha xeryo casri ah oo lagu tababaro ciidanka.
Jeneraal Cabdirisaaq Khaliif ayaa tilmaamay in dowladda Tukriga ay sidoo kale gacan ka gaysan doonto dayactir lagu sameeyo xeryihii hore ee ciidanka Soomaaliya iyo dib u dhisidda ciidankii Kumaandooska ee Soomaaliya.
Wuxuu sheegay in macallimiin Turkiga ka socota ay sidoo kale gudaha dalka tababarro ku siin doonaan askarta dowladda Soomaaliya.
Wasaaradaha gaashaandhigga Soomaaliya iyo Turkiga ayaa horay u kala saxiixday heshiis dhinaca milateriga ah, iyadoo sidoo kalena taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya uu shalay heshiis kaas lagu xoojinayo la saxiixday saraakiil ka socotay Turkiga oo gaartay Muqdisho.
Jeneraal Daahir Aadan Cilmi oo ah taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa heshiiskan ku tilmaamay mid isbeddel weyn ku soo kordhin doona awoodda iyo tayada ciidamada.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsShir dhibaatada warbaahinta looga hadlayo.Masar oo Ra'iisal wasaare Cusub loo Magacaabay.Eritrea: Panel Finds No Arms Were Sent to Somali RebelsCiidanka DF oo dhexdood isxabadeeyay.Arsenal are at a crossroads – but must stick with Arsene Wenger if he is prepared to go January shopping.